Isikhathi sokusebenza se-Guangzhou - i-Guangzhou Ontime International Logistics Co., Ltd
I-Guangzhou Ontime International Logistics Co., Ltd. (ngemuva kwalokhu ebizwa nge-GZ Ontime) etholakala esifundeni saseBaiyun, eGuangzhou. Singumenzeli we-DHL, i-UPS, i-TNT, i-FedEx, i-Amazon imigqa ekhethekile (Ithunyelwe ngqo ku-FBA), ulwandle oluthwala impahla, ukuphakamisa umoya, ukuthuthwa kwezitimela namaloli. Inkampani yethu ithobela ifilosofi yebhizinisi "yamakhasimende kuqala, qhubekela phambili" kanye nomgomo "wamakhasimende kuqala" ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme. Uyemukelwa ukucela ikhotheshini!
I-GZ Ontime Logistics iyinkampani yezobuchwepheshe yamazwe omhlaba enolwazi oluneminyaka eyi-10 endaweni yokuthumela emhlabeni wonke. I-GZ Ontime ingahlinzeka ngezinsizakalo ezinjengalezi ezingezansi: ukungenisa kanye nokuthumela impahla ngaphandle, ukuthunyelwa kwempahla kanye nokuthumela impahla kwamanye amazwe, ukuthunyelwa kwemishini emikhulu, ukukhombisa ezokuthutha, ukugcinwa kwempahla nokuvunyelwa kwamasiko.
Ukunamathela kumbandela wensizakalo yezokuphepha, isivinini, ukunemba kanye nomnotho, sinikeza amakhasimende ukuthuthwa komoya emhlabeni jikelele nakwasekhaya, ukuveza okujwayelekile (i-FEDEX, i-DHL, i-UPS, i-TNT, i-EMS), ukuthuthwa komhlaba, izinsizakalo zokuhamba ngemikhumbi, futhi singanikeza ukuthuthwa kolayini okhethekile kuya eHong Kong, Macao, naseTaiwan.
Inkampani yethu inobudlelwano besikhathi eside bokusebenzisana nabanikazi bemikhumbi njenge-apl msk cscl.
Impahla yezindiza inezinzuzo zezindiza ezinkulu nezinsizakalo zokuveza. Besingakwamukela ukuqhutshwa kwempahla yasolwandle nasemoyeni evela kuwo wonke umhlaba.
Le nkampani incike kwi-guangzhou futhi izinze pearl river delta, guangdong, radiation ezweni lonke, nabalingani besikhathi eside eBeijing, shanghai, tianjin, qinghai, dalian nakwamanye amadolobha.
Ngasikhathi sinye, sekusungulwe inethiwekhi yokuthuthwa kwempahla egcwele ngokuphelele, enganikeza amakhasimende uhla oluphelele lwezinsizakalo zokungena endlini ngendlu emhlabeni jikelele. Singabantu bendawo. Singabantu bomhlaba wonke. Sikhona yonke indawo lapho ufuna futhi udinga ukuba khona.
Siyayazi imizila, izinketho, amanani, imali ekhokhwayo kanye nendlela engcono yokuthumela izimpahla zakho.
Masikwakhele isimo esikahle sokugcinwa kwempahla esizokugcina usebhizinisini isikhathi eside. Impahla yakho izofika ngokuphepha nangesikhathi futhi izokongela izindleko zesikhathi eside.